लोकतन्त्रमा बृद्धतन्त्रको सर्वोच्चता - हिमाल दैनिक
लोकतन्त्रमा बृद्धतन्त्रको सर्वोच्चता
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १७:३९
सामान्यतः सबै देशमा, अझ खासगरी नेपालमा उमेर र राजनीतिको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रसंग बारम्बार उठ्दै आएको छ।
त्यतिमात्र होइन, एशियाका अधिकांश मुलुकमा अत्यन्त ठूलो र पाको उमेरसम्म पनि मानिस राजनीतिमा अल्झिरहन्छन् । स्वभावले नै मानिस बडो ज्याद्रो हुन्छ। गाउँ घरमा परिवारमा जो बुढो मानिस हुन्छ, उसैको खटन चलेझैँ पार्टी अथवा देशमा बुढोले नै खटन चलाएको हुन्छ।
यस किसिमको खटन आजदेखि होइन, एशियामा जागरण आएदेखि नै चलेको छ। यसखाले खटनको सबभन्दा आलोच्य उदाहरण स्वयं गान्धीजी नै थिए।
गान्धीजीलाई गोली लाग्दा उनी ७९ वर्षका थिए। त्यो उमेरमा गोली लागेपछि उनको देहान्त भयो। तर, गान्धीजीको देहान्तपछि पनि भारतमा जहाँ गयो त्यहाँ गान्धीजीकै नाम चल्दथ्यो। जवाहरलाल नेहरूले गान्धीकै नाउँ लिने, जयप्रकाशले गान्धीजीकै नाउँ लिने, विनोवा भाले पनि गान्धीकै नाउँ लिए र राजेन्द्र प्रसादले पनि गान्धीकै नाउँ लिए। उमेर र अनुभवका कारण पनि गान्धीलाई सबैले ‘बापु’ अर्थात बुबा भन्दथे।
गान्धीपछिका दोस्रो नेता नेहरू उनीभन्दा २० वर्ष कान्छा थिए। एकपटक यस्तो संयोग परेछ, युरोपका एक नामी लेखक तथा पत्रकार आर्थर कोइस्लर १९५० को दशकमा ५४/५५ तिर भारत भ्रमणमा आएछन्। उनी कुनै समयमा कम्युनिष्ट थिए। पछि कम्युनिष्टसँग मोह भंग भएपछि उनले कम्युनिष्टका बारेमा धेरै आलोचनात्मक किताबहरू लेखे।
भारत भ्रमणमा आएका कोइस्लरले खुब घुमे। यसरी घुम्नेक्रममा उनी हिन्दुस्तानको जहाँ पुगे त्यहाँ ‘बापु’ भन्ने सुने। पछि उनले लेखेः हिन्दुस्तानमा ‘डेमोक्रेसी’ हेर्न गएको त त्यहाँ ‘बापुक्रेसी’ अर्थात ‘पितातन्त्र’ रहेछ। पितातन्त्रलाई अझ परिमार्जित गरी भन्ने हो भने, ‘बृद्धतन्त्र’ भने पनि भयो।
हुँदा हुँदा उनले थप टिप्पणी गर्दै भने, यो देशमा छोरालाई आफ्नो श्रीमती छान्ने अधिकार पनि रहेनछ। उसका आमा/बाबुले नै छानिदिने रहेछन्। २५ वर्षकी छोरीलाई आफ्नो लोग्ने छान्ने अधिकार छैन, २६ वर्षको छोरालाई श्रीमती छान्ने अधिकार छैन। त्यो अवस्था देखेपछि उनले टिप्पणी गर्दै भनेः यस देशका युवा युवतीलाई आफ्नो पत्नी र पति छान्न पनि चासो रहेनछ। पति र पत्नीसम्म छान्न नसक्ने युवा युवतीले के को राष्ट्रपति छान्न सक्लान्? उनको यो टिप्पणी अति मार्मिक छ।
एशियाका अधिकांश देशमा यो बृद्धतन्त्रको परम्परा छ। भारतमा पनि छ, चीन र नेपालमा पनि छ। बृद्धहरूलाई हामीले विशेष सम्मान गर्छौँ। यो परम्परा कति ठिक र कतिसम्म बेठिक? जतिबेलासम्म ठिक थियो, किन ठिक थियो? जुनबेला बेठिक छ, किन बेठिक छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले बृद्धतन्त्रका बारेमा देश, काल, परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर टिका टिप्पणी गर्नुपर्दछ।
कुनै जमानामा जब हामीले परम्परागत ढंगले समाज चलाएका हुन्थ्यौँ, त्यतिबेला बुढाहरूको राय सल्लाह बडो महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। नेपालमा प्रचलित उखान छः आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको। किनभने उनीहरू ज्ञान, शिप, विद्याका स्रोत हुन्थे। सर्वगुण सम्पन्न हुन्थे। अहिले जस्तो सञ्चार क्रान्ति भएको थिएन। अहिले एउटा बटन दबायो भने दुनियाँको जानकारी पाउन सकिन्छ। पुस्तक छापिएको हुदैनथ्यो। त्यतिबेला यो कुरा सम्भव थिएन। ज्ञानको स्रोत नै बुढा बुढीसँग थियो। त्यसैले बुढा बुढीको विशेष आदर गरिन्थ्यो।
अहिले दुनियाँ बदलिएको छ। विगत २५/३० वर्षमा त झन तेजीले बदलिएको छ। विश्वको ज्ञान एउटा बटनमा सिमित भएको छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा बुढाहरूप्रतिको सम्मान पनि घट्दो क्रममा छ।
त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, के कस्ता चुनौति हाम्रो अगाडि छन् त्यी हेर्नु पर्यो। युद्धको बेग्लै चुनौति हुन्छ, शान्तिको बेग्लै चुनौति हुन्छ, पार्टीभित्रको झगडाको बेग्लै चुनौति हुन्छ, पार्टी/पार्टीबीचको झगडाको बेग्लै चुनौति हुन्छ। संविधान बनाउँदाको बेग्लै चुनौति हुन्छ, संविधानलाई बचाउँदाको बेग्लै चुनौति हुन्छ, चलाउँदाको बेग्लै चुनौति हुन्छ। त्यसैले को बुढो, को तरुनो? यसै भन्न सकिँदैन।
मैले भने, गान्धी गोली लागेर मर्नु भयो। मर्नु भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि उहाँ धेरै कुरा गरी हिँड्दै र काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि कठिन काम जुन एउटा १८ वर्षको युवकले गर्न नसक्ने काम। वैशाख÷जेठको प्रचण्ड गर्मीमा पनि उहाँ घरघर, टोलटोलमा उत्पीडित हिन्दु मुसलमानका बीचमा गएर शान्ति र सदभावको सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गान्धीलाई लर्ड माउण्ट बेटनले भनेका थिए, यीनले गरेको काम सेनाको एउटा डिभिजनले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले बुढो हुनेवित्तिकै मानिसको क्षमता सकिन्छ भन्ने हुँदैन।
हाम्रै देशमा पनि सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भयो। मैले सम्झिएसम्म उहाँको जन्म सन १९१५ अर्थात बी.पी. भन्दा एकवर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो। अर्थात जनआन्दोलनको नेतृत्व लिँदा उहाँ ७५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। ६५/६६ वर्षको किसुनजी, गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला उहाँहरूकै खाँचो थियो।
तर, अहिले आएर हाम्रो पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता चाहियो भनि आवाज उठिरहेको छ। यो नयाँ पुस्ताको आवाजको अन्तर्य बुढाहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने छ।
यस शिलशिलामा एउटा मार्मिक प्रसंग छः विन्स्टन चर्चिल द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा बेलायतका प्रधानमन्त्री थिए। उनी कुनै विधिपूर्वक बेलायतको प्रधानमन्त्री छानिएका होइनन्। हिटलरले पेल्दै र जित्दै ल्याए। हिटलरसँग नलडी भएन। उनीभन्दा अगाडि नेविल च्याम्बर्लेन थिए। च्याम्बर्लेनले के भने भने, समुद्र पार गरेर हामी किन हिटलरसँग निहुँ खोज्न जाने? हिटलरले चाहेको सानोतिनो काम गरिदिउँ र हामी शान्तिपूर्वक बसौँ।
हिटलरको आक्रामक रवैया देखिँदै थियो। सबका सबलाई तर्साउँदै थियो। तर, हिटलरले जे गर्नु छ गरोस्, हामी शान्तिसँग बसौँ भनि च्याम्बर्लेनले हिटलरसँग साँठगाँठ गरे। त्यतिबेला चर्चिलले संसदमा एक्लै विपक्षमा बसेर पनि च्याम्बर्लेनलाई सचेत गराएका थिए। उनले बेला बेलामा जोडदार रूपले भनेका थिए, यसरी च्याम्बर्र्लेनले गरेजस्तो सन्धी गर्नु भनेको गोहीलाई दुई तीन टुक्रा मासु खुवाइराख्यो भने मेरो चाहिँ खाँदैन अथवा मेरो पालो आउँदैन र मलाई छोडिदिन्छ भने जस्तै हो। अर्थातः ‘Each one hopes that if he feeds the crocodile enough the crocodile will eat him last.’
त्यसपछि चर्चिललाई नेता बनाउनुपर्छ भनेर संसदभित्र हल्ला चल्यो। सिंगो संसदले उनलाई नेतृत्व दिएर प्रधानमन्त्री बनायो। त्यतिबेला खासै पार्टी पनि थिएनन्। पार्टी छोड्ने र बदल्ने कुरा भइरहेको थियो। उनी प्रधानमन्त्री बने तर, झण्डै ६ वर्ष युद्ध चल्यो। ६ वर्षसम्म युद्ध चल्दा पछि उमेर पुगेपछि उनको देहान्त भयो।
चर्चिलको निधनपछि उनका निजी डाक्टर लर्ड मोरानले उनकोबारेमा डायरी लेखे। माओ त्से तुङ्को निधन पश्चात उनका निजी डाक्टरले ‘प्राइभेट लाइफ अफ माओ त्से तुङ्’ शिर्षकमा डायरी प्रकाशित गरे जस्तै।
यसरी मोरानले डायरीको निश्कर्षमा लेखेका छन् कि लडाई त बल्ल बल्ल जितियो। चर्चिलको समस्या के थियो भने, कहिले उनलाई १०३ डिग्री त कहिले १०४ डिग्री ज्वरो आएर अस्वस्थ भइरहने। उनलाई भय भन्ने नै थाहै थिएन। भय एउटा मनुष्यको स्वभाविक प्रवृत्ति हो।
त्यो बिमारी अथवा अन्तिम अवस्थामा पनि रहिरहन्छ। जस्तो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरूले भन्ने गरेका छन् उहाँले हाइ डोजको औषधी सेवनले यस्तो भएको हो, उहाँ कहाँ धेरै कुरा बुझ्नु हुन्छ र?
यहाँ मैले उहाँकाबारेमा आफ्नो टिप्पणी गर्न खोजेको होइन। मेरो पनि केहि बृद्ध नेताहरू जस्तो किसुनजी, गिरिजाबाबुसँग संगत भयो। बृद्धाअवस्था आएपछि मानिसमा केहि कमजोरी देखिन्छ। उ बिरामी जस्तो देखिन्छ, स्मरण शक्ति पनि कमजोर भएको हुन्छ। तर, स्मरण शक्ति कमजोर भएको व्यक्तिलाई मेरो अवस्था ठिक छैन भन्ने कहाँ थाहा हुन्छ र? हुँदैन नि। ऊ आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्छ। जस्तै कान नसुन्ने मानिसले म कान सुन्दिन कहाँ भन्छ र? त्यसैले बृद्धाअवस्थामा हाम्रो सोचाई बेग्लै भइरहेको हुन्छ, देश अर्कै तर्फ गइरहेको हुन्छ।
यसै कुरालाई रामायण र महाभारतमा पनि बडो घुमाएर देखाइएको छ। कोहिसँग नहारेका रामलाई बृद्ध भएपछि उनैका छोरा लवकुशले हराए भनिन्छ। यहाँ के भन्न खोजेको? पाण्डवहरू बृद्ध भएपछि बाब्रुभानले घेरे तर, अर्जुनको गाण्डिभ चल्नै सकेन भनिएको छ।
दशरथ राजाले उमेर पुगेपछि रामलाई गद्दि दिए भनि बाल्मिकीले रामायणमा लेखेका छन्। यहाँ भन्न के खोजिएको छ भने, पुस्तान्तरणका साथ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नसक्नु कुनै पनि नेताको खुवी हो। तर, कुन नेता कहिले बृद्ध हुन्छ? बृद्ध अवस्था भनेको शारीरिक अवस्था हो कि मानसिक अवस्था हो? त्यो अलग कुरा हो। अत्यन्त बृद्ध मान्छे पनि देश, काल र परिस्थितिकाप्रति अत्यन्त चनाखो र जिम्मेवार रहन्छ। जस्तो गणेशमान, किसुनजीकै उदाहरण लिन सकिन्छ। गान्धीकै उदाहरण पनि लिन सकिन्छ। युरोपको कुरा गर्दा जर्मनीका पाउल भन हिन्डेनबर्ग जर्मनीको राष्ट्रपति बन्दा ७८ वर्षका भइसकेको थिए। अहिले मलेसियाका महाथिर मोहम्मद ९२ वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति भएका छन्। तर, यी देखाउने कुरा मात्रै हो।
इतिहासमा कस्तो छ भने, मरेका मानिस पनि तीन चार वर्षसम्म राजा भएका छन्। मरिसकेपछि पनि लास देखाएर शासन चलाएका उदाहरण छन्। तींमध्ये स्पेनमा फ्रान्सीस्को फ्रेन्को एक थिए। यो कुरा सहि हो कि उमेर पुगेपछि प्रकृतिको नियम लागू हुन्छ। निर्णय शक्ति क्षिण भएर जान्छ, यसमा कुनै शंका छैन।
मुख्य कुरा के हो भने, उमेरका आधारमा यसको फैसला गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा भने अनिवार्य रूपले भन्न सकिन्छ कि, एउटा ठूलो नेता, प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापतिको मुख्य गुण के हो? उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हुन्? यसबारे इतिहासमा कतै छलफल भएको छ। विवादित र चर्चित विषय बनेको छ। कुनैै पनि नेताले कुनै काम थाल्दछ तर, सानातिना कुरा छोडेर कुनै पनि काम उसको जीवनमा पूरा हुन सक्दैन।
कसैले नेपालमा गरिबी हटाउँछु अथवा नेपालको नदीनालामा जहाज कुदाउँछु भन्छ भने एक जन्ममा गर्न सक्दैन। राजनीतिक काम कहिल्यै नसिद्धिने कुरा हो भने, जीवन त अनिश्चित छ। मेरो उमेर ८० वा ९० पनि हुनुपर्दैन। जहिले पनि देहान्त हुन सक्दछ।
त्यसैले ६० वर्षको उमेरपछि वान प्रस्थ भयो भन्ने चलन छ। हामीले साच्चिनै देश वा पार्टीलाई माया गर्छौं भने एउटा कुरा सम्झिनु जरुरी छ कि, म मर्दा पनि देश वा पार्टी मर्दैन। म पछि पनि पार्टी रहन्छ। तर, पार्टी सुयोग्यको हातमा जानु पर्यो। त्यसैले के भनिन्छ भने कुनै पनि नेताले कम्तिमा तीन चारवटा कुरा सम्झिएर जानुपर्छ। आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न वा कमजोर बन्न दिनुहुँदैन। यो उसको प्रमुख कर्तव्य हो। यो मैले भनेको होइन, राजनीतिक शास्त्रका अध्येताहरूले भनेका हुन्।
दोस्रो कुरा, कनै पनि नेताले नेतृत्व लिइसकेपछि वा पदग्रहण गरिसकेपछि वा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अधिकार कर्तव्यका साथ आउँछ।
सभापति भएँ भनेर गर्व गर्ने तर समय दिन सक्दिन, कार्यकर्तालाई भेट्न सक्दिन भनेर हुँदैन। अधिकार पाएपछि कर्तव्यका लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री ह्यारोल म्याकमिलीयनले प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्दछ भनि किताब लेखेका छन्। सफल प्रधानमन्त्री को हुन सक्दछ र उसको ठूलो गुण भनेको कम्तिमा १४ घण्टा काम गर्नु पर्दछ।
म्याकमिलनले लेखेका छन्ः १४ घण्टा काम गर्नुपर्दछ। ल १४ घण्टा नभ्याइएला, कम्तिमा १२ घण्टा त राजनीतिक कामका लागि समर्पित गर्नुपर्यो नि! शारीरिक कारणले वा स्वास्थ्यका कारणले यदि उसले १२ घण्टा समय दिन सक्दैन भने त्यो पदका लागि उनीहरू योेग्य पात्र होइनन्।
लर्ड एड्मिडरलले के लेख्छन् भनेः कर्मचारीले त ८ घण्टा काम गरे पुग्छ, मन्त्रीले त्यो भन्दा बढि गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि १४ घण्टा काम गर्नुपर्छ।
नेताको सबैभन्दा ठूलो गुण के हो भने, उसले एउटा सुयोग्य उत्तराधिकारी बेलैमा छान्नसक्नु पर्दछ। त्यसलाई तालिम दिनसक्नु पर्दछ। मैले थालेको काम आफ्नै जीवनमा सकिदैन। त्यो कामलाई उसले दक्षतापूर्वक अगाडि बढाउँदछ भनि उसलाई अभिभारा दिनुपर्दछ।
यस काममा एउटै मात्र सफल नेता हुन बी.पी. कोइराला। उनले उमेर छँदै मपछि यी तीन जनाले पार्टी चलाउँछन् भनि गणेशमानलाई सर्वोच्च नेता, किसुनजीलाई कार्यकारी सभापति, गिरिजाबाबुलाई महामन्त्री बनाएर जानुभयो र पार्टीले निरन्तरता पायो। अहिले हाम्रा नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ कि, उहाँहरूपछिको नेता को हो? त्यो हामीले बेलैमा छानेर जिम्मेवारी दिएर जानसक्नु हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो उमेर के छ, के छैन त्यो महत्वपूर्ण होइन।
(कांग्रेस नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रदिप गिरिसँग बिष्णु बुढाथाेकीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित विचार)
गिरिका थप लेखहरू पढ्न याे लिंक खाेल्नुहाेस्ः
प्रचण्ड र विप्लवको गतिविधिमा धेरै फरक देखिदैन
Prevपछिल्लोरसुवागढी र सान्जेनको साधारण सेयर खुल्यो
अघिल्लोसरकारको रवैया यस्तै रहे आन्दोलनको विकल्प छैनः देउवाNext